Roobab ka da’ay Magaalada Garoowe oo Khasaare geystay – SBC
Roobab ka da’ay Magaalada Garoowe oo Khasaare geystay
Roobaba mahiigaan ah oo sababay Khasaare ayaa ka da’ay qeybo ka mid ah gobolka Nugaal iyo magaalada Garoowe xarunta dowlada Puntland.
Roobabkani ayaa saameyn ku yeeshay dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Garoowe isagoona dhulka dhigay qaar ka mid ah guryaha dadweynaha ee xaafadaha qaar ee magaaladaasi.
Saaka oo aan Booqasho ku tagnay xeryo qaxooti oo ku yaala magaaladaas islamarkaana dadkii degenaa uu khasaare gaar siiyay roobkii da’ay ayaa waxaan ku aragnay guryihii ay degenaayeen dadka tabaaleysan oo dumay islamarkaana ay goobo ka agdhow ay ku sugan yihiin dadkii lahaa .
Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee khasaaraha kala kulmay roobkaas oo la hadlay SBC ayaa sheegay tan iyo intii uu bilowday roobka ay taagnaayeen islamarkaana ay celin waayeen guryihii bacaha ka sameysnaa ee ay ku hoos jireen dhibicda roobka taas oo kasabtay in ay ku soo duman .
Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay gudoomiye yaasha Kaamamka ku yaala magaalada garoowe, waxaana uu sheegay in ka sokow khasaaraha ka dhashay roobkii ku da’ay ay ka sii cabsi qabaan waxyaabaha ka sii dhalan kara biyihii uu dhigay, taas oo uu ku sheegay in ay ka baqanayaan dhibaatooyin caafimaad iyo mid nololeedba ay soo wajahdo.
Sikastaba ha ahaatee waxa ay dadkani Barakacayaasha ah ugu baaqeen cid alaala cidii wax u qaban karta in ay la soo gaaraan gar gaar deg deg ah oo ay ku noolaadan.
Dowlada Hoose iyo Maamulka Gobolka Nugaal ayaa iyagu booqday maanta goobahaasi iyagoona isku dayaya in ay wax ka qabtaan khasaaraha halkaasi ka dhashay .